I-Estes yiGoogle Pixel entsha, ifoni eyenziwe yiGoogle | Izindaba zamagajethi
I-Estes yiGoogle Pixel entsha, ifoni eyenziwe yiGoogle
UMiguel Hernandez | | Isethulo
Besisolo sivuza izinsuku, amahemuhemu izinyanga, futhi namuhla ngo-Okthoba 4, ngesikhathi sesethulo esenzeke namuhla siholwa yi-Google, i-Google Pixel, amadivayisi amasha eselula abazali be-Android, amadivayisi amasha i-Google ehlose ngawo ukukhipha abenzi bawo Njenge-Samsung kusuka phezulu phezulu, izinkampani eziguqula isistimu yokusebenza yeGoogle ngokukhethekile ngokungeza izingqimba zokwenza ngokwezifiso. Kodwa-ke, uGoogle uhlose ukujikajika, avalelise uhla lweGoogle Nexus, nokwamukela iGoogle Pixel, Sizokutshela konke ngalawa madivayisi amasha weselula avela enkampanini ethi "Ungabi mubi".
Idivayisi inengilazi yangemuva nohlaka lwensimbi, njengoba ukuvuza kuthembisile. I-Pixel iyidivayisi yokuqala enokuhlanganiswa okugcwele kwe-Google Assisstant, futhi ithembisa izithombe ezinhle, ukugcinwa kwayo yonke into efwini futhi ilungele iqiniso langempela.
1 Umsizi weGoogle njengefa eliyinhloko
2 Ikhamera yeselula ecatshangwa ukuthi ingcono kunazo zonke ezake zenziwa
3 Ukushaja okusheshayo, ukuzimela okuhle nokuhlanganiswa okuyisisekelo
4 Imininingwane nemibala
Umsizi weGoogle njengefa eliyinhloko
Ithimba leGoogle linokuningi kokukwenza ngokuhlanganiswa okugcwele kweGoogle Pixel noMsizi weGoogle, yize ngehora benganikanga lutho olungaphezu kwalokho ebesingakuthola noSiri, umsizi wangempela womncintiswano. Yize iqiniso ukuthi umsizi weGoogle ehamba ngolimi olulula kakhulu nolunemvelo kuneSiri, ngakolunye uhlangothi, izivivinyo zenziwe ngesiNgisi, ngakho-ke ngeSpanish singathola ubunzima obengeziwe.
Ngakolunye uhlangothi, benze imiboniso eminingana, konke kugxile kuzinsizakalo zeGoogle, ngokwesibonelo becela itafula ngeGoogle Maps,
Ikhamera yeselula ecatshangwa ukuthi ingcono kunazo zonke ezake zenziwa
IGoogle ikhipha isifuba sayo futhi ikhombisa ikhamera enenzwa eyodwa, kepha kuthiwa inikela ngokusebenza okuhle kakhulu. Ngaphezu kwakho konke ukuncintisana, iDxOMark edumile imnikeze amaphuzu angekho ngaphansi kwama-89. Kodwa-ke, ine-Smartburst, imodi yokuqhuma ethakazelisa kakhulu, ehambisana nobuchwepheshe be-HDR +, ukuvezwa okude komzuzu ngamunye okungaba wusizo, umsebenzi wawo ukunciphisa umsindo nokwenza ngcono imibala. Izithombe zokubonisa zibonisa ukusebenza okuhle ekukhanyeni okuphansi noma ezimeni zokukhanya zokufakelwa.
Baphinde baqinisekisa ukuthi ikhamera yeGoogle Pixel iyona eshesha kakhulu emakethe, yize mhlawumbe into ethakazelisa kakhulu ukuqiniswa kwevidiyo, ethembisa amavidiyo asezingeni eliphakeme kakhulu ngaphandle kwezimo zokurekhoda. Kepha bebengafuni ukuhlala kuphela kwi-Hardware, Ikhamera ye-Google Pixel ihlanganiswe ngokuphelele nezithombe ze-GoogleNgale ndlela, bazoba nesitoreji esingenamkhawulo sezithombe namavidiyo esinqumweni sokuqala, noma ngabe yisiphi isikhala, bathathe ithuba lokuqalisa ukuhlekisa kwisethulo, okukhombisa isaziso sokushoda kwesikhala ku-iOS (Apple).
Ukushaja okusheshayo, ukuzimela okuhle nokuhlanganiswa okuyisisekelo
Zombili lezi zicelo zizohlanganiswa ngokuphelele nohlelo, uGoogle ukugcizelele ukuthi iyunithi elifanele kakhulu phakathi kwehardware nesoftware emlandweni weGoogle, futhi kubonakala sengathi kuzoba ngokoqobo. Ngakolunye uhlangothi, ngokuya ngebhethri banikele Amahora we-7 wokuzimela nge-15min kuphela yokukhokha, ihambisana nokushaja okusheshayo, ibhethri lingelokuqala ezinkingeni ezibhekene namadivayisi eselula namuhla.
Kusukela manje khohlwa ngezibuyekezo, iGoogle ifake isistimu yokuvuselela okuzenzakalelayo ukuze ithuthukiswe Ukuphepha kwe-Android Nougat kumadivayisi wePixel. Kepha hhayi lokho kuphela, bangeze uhlelo lwamakhasimende angama-24/7 ngaphakathi kwedivayisi, nabasizi abambalwa abaphethe ukukusiza uthuthukise umuzwa wakho ngeGoogle Pixel.
Ngale ndlela, bengeza futhi indlela yokuheha abasebenzisi be-iOS, ngqo ngekhebula ungadlulisa imininingwane eminingi enjengothintana nabo, izithombe kanye neMessages.
I-Google Pixel izonikezwa ngombala ogqamile oluhlaza okwesibhakabhaka, omnyama, nesiliva, onentengo ngo- $ 649, okungahle kube yikhona Ama-euro angama-700 eSpain. Ngakolunye uhlangothi, iyatholakala ukuthi ibekelwe kusuka ku-Google Play Isitolo, futhi izohanjiswa e-United States, Australia, Canada, Germany nase-United Kingdom, kuzo zonke izimakethe akukho okulindelwe kuze kube ngu-Okthoba 13. Sishiya imininingwane:
Isibonisi esingu-5 noma esingu-5,5 intshi se-AMOLED
I-Qualcomm Snapdragon 821
I-4GB ye-LPDDR4 RAM
I-Pixel Imprint inzwa yeminwe
3,450 mAh ibhethri le-5,5 ″, ne-2770 mAh yenguqulo engu-5 XNUMX
Ikhamera yangemuva ye-12,3 MP enamaphikseli we-1,44 nm kanye nokuvula okugxile kwe-f / 2.0
Isitoreji esingu-32GB noma esingu-128GB
Idivayisi entsha yakwaGoogle ikhomba izindlela, inikeza izici ezimangazayo, yize kuyiqiniso, inqamula ngentengo enkulu njenge-Samsung Galaxy yesikhashana, ngakho-ke ukulwa kuzoba nzima futhi kube nobudlova uma kuqhathaniswa nemikhiqizo yalolo sayizi. Sizolinda izindaba mayelana nedivayisi, njengokusebenza. Sithemba ukuthi ku-Actualidad Gadget ukukulethela isibuyekezo esichazayo. Sishiye kumazwana okulindele nge-Google Pixel.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Isethulo » I-Estes yiGoogle Pixel entsha, ifoni eyenziwe yiGoogle
I-Amazon ivala umpompi futhi ngeke isavumela ukunikezela ngemikhiqizo ukuthola izibuyekezo ezinhle